Ziyini ama-estrogens kwabesifazane?
Yini eyenza owesifazane abe ngowesifazane wangempela? Kusukela ekubukeni kwama-hormone - lawa yi-estrogens, ukungabi nalutho noma okunye okungabangela impilo.
Ngakho-ke, yiziphi izi-estrogens kwabesifazane? Eqinisweni, inhlanganisela yama-hormone amathathu - i- estradiol , i-estriol ne-estrone, echaphazela ukulungele isilwane sowesifazane sokuzala futhi inesibopho sokusebenza kohlelo lokuzala. Emzimbeni wesifazane, lezi zakhi zakhiwa, ngezinga elikhulu, emaqanda omzimba. Amadoda abuye abe nesifo se-estrogen, nakuba emithonjeni enciphise, futhi ihlanganiswa nezigulane eziyingozi.
Kuyini i-estrogen enesibopho?
Uma owesifazane ene-estrogen eyanele, ukubonakaliswa kwayo kwangaphandle kuboniswa ngobufazi befomu. Okungukuthi, isibalo sakhiwa "i-hourglass" - ngesinqe esincane, kunalokho amabele amancane namaqhwa aqondile.
Kodwa okubaluleke kakhulu, lokho kuthinta i-estrogens - lokhu ukuthuthukisa uhlelo lokuzalana olugcwele. Bayibophezele lokhu:
ukudala i-microflora efanelekayo yokwakheka kwezingane;
ukuthuthukiswa kwezigulane ezincelisayo;
amathuba okukhulelwa nokukhulelwa;
Ngokuvamile, konke i-hormone estrogen enesibopho kubaluleke kakhulu kusukela ekubukeni kokuzala. Ngokuphathelene nalokhu, ukuntuleka kwaleli hormone kubonakala njengenkinga yezokwelapha kakhulu.
Uma kukhona ama-estrogen ambalwa emzimbeni wesifazane, kufanele ngenzeni?
Uma kukhona ukungabi nesifo se-estrogen, okokuqala, udinga ukubona udokotela, ukuze kutholakale ukuxilongwa kwezokwelapha futhi inkambo ngayinye yokwelashwa ikhethiwe. Ngokuvamile odokotela bahlinzekela ukukhulelwa kwezidakamizwa ngokuqukethwe kwe-estradiol nezinye izinto eziyinkimbinkimbi, okubangela ekukhiqizeni i-estrogen emzimbeni. Futhi enkambweni yezochwepheshe ezidakamizwa ezikhethekile ze-hormone.
Yini eyenza i-estrogen? Ngaphezu kwemithi, ukuthuthukiswa kwayo kukhuthazwa imikhiqizo yokudla, isibonelo:
ubisi kanye nesoya;
inyama yezinhlobo ezahlukene namafutha wezinhlanzi;
kusuka emifino - izaqathe, utamatisi, iklabishi;
wezithelo - amagilebhisi ezinhlobonhlobo ezibomvu.
Le mikhiqizo ibandakanya i- phytoestrogen , isakhi semvelo esithinta ama-estrogen futhi sibeka isizinda semvelo yama-hormone kubantu besifazane. Isimo sangemuva se-hormonal kufanele sihlolwe njalo, ngoba impilo yowesifazane kanye nokukwazi kwakhe ukuba ngumama kuxhomeke kulokhu.
Ukususwa kwe-polyp endometrial
Ukudla okunomdlavuza webele
Ukuvinjelwa kokuvimbela abesifazane
Isibeletho sikhulisiwe - izimbangela
Ukukhathazeka kwe-fibro-cystic - izimpawu, ukwelashwa
I-Neoplasm in the gland gland
Ukudumala kwesibeletho - izimpawu
Izimpawu zokuqala ze-syphilis
Ukunakekelwa kobuciko obunamathebhu ne-birch tar
Ubuhlungu obukhulu ngokuya esikhathini
Umkhuhlane ophuma emzimbeni
UBrad Pitt akazange afune ukusho ukuthi ugogo wayefa
Ithebula lekhompyutha ye-Glass
Ukuthuthukiswa okubonakalayo kwezingane ezincane
I-Rotavirus - ukwelashwa
Kungani isisu siphakanyiswa ngaphambi kokuya esikhathini?
Kungani i-follicle ingaqhubeki?
Izithombehoot ekuqaleni kwentwasahlobo
Amaphilisi wephepha lamaphepha
Indlela yokusinda ekuhlukaneni nomfana?
Isibonelo sosayizi we-Tess Holliday silindele ingane
Cervicitis - ukwelashwa
Ikhekhe nama-apula ku-kefir - zokupheka zokupheka ezilula kunazo zonke nezokuqala kuzo zonke ukunambitheka!
I-sofa yekhanda netafula
Inkukhu isiphuzo - iresiphi